Tamang Samaj|Tamang|Tamang News|Portal – म्हेनङ/म्हेनिङ : आरोप/प्रश्न, प्रमाण र स्पष्टिकरण
म्हेनङ/म्हेनिङ : आरोप/प्रश्न, प्रमाण र स्पष्टिकरण
Oct 10, 2016 admin History, Local News
खोजराज गोले १. शुरूवात यसअघि लोकोत्तर लोकवादी विचार समूहद्वारा परिचालित ”म्हेनिङला सोइनम” नामक सांस्कृतिक आन्दोलन पनि चलाएको थियो । यसक्रममा काठमाडौं, काभ्रे, सिन्धुली, सर्लाही, कास्कीका विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो । दुर्इ वर्षसम्म औपचारिक कार्यक्रमहरू गरिसकेको यस समूहले तामाङ समुदायका अनि तामाङप्रति विशेष लागिपरेका युवाहरू साथै संस्था र सञ्चारगृहसँग मिलेर यस आन्दोलनलाई व्यापक बनाउँदैछ । यो आन्दोलन यसपालि भने अनलाइन (फेसबूक/लाइकपेजसमेत) मार्फत् चलाइरहेको छ । यससम्बन्धमा धेरै साथीहरूले पक्ष र विपक्षमा लेखहरु साथै अनुच्छेद र मतहरू राखिसकेका छन् । यसैगरी धनप्रसाद तामाङ र खोजराज गोलेद्वारा लेखहरू लेखिइसकेका छन् । ती लेखहरूमा म्हेनङ के हो ? ‘म्हेनङ’ शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो ? कहिलेदेखि यस पर्वको शुरूवात भयो ? कुन-कुन तिथिमा कुन कुन पूजा गरिन्छन् ? तिनीहरूसँग जोडिएका मिथकहरू के कस्ता छन् ? म्हेनङमा बोम्बो र लामा (बौध्द)सँग जोडिएका पक्षहरू के के हुन् ? यससँग जोडिएका प्राकृतिक, आर्थिक, मौसमी र पहिचानका पक्षहरू के-के अनि कस्ता छन् भन्ने बारेमा उल्लेख गरिसकेको छ ।
यस समूहले तामाङ सभ्यता उत्खनन्, सामरिक तथा ऐतिहासिकस्थलको भ्रमण, आसा अभियान, ताम्सालिङ साथै सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्भावना, विजीनेश एसोसियसन, कविता उद्यान, मौलिक पहिचानको खोजी, जैविक विविधता, राजनीतिक दृष्टिकोण, मिथ सङ्कलन, महाकाव्यको तयारी, आदिवासी सञ्ज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, तामाङशास्त्रहरू, चाडपर्व, मौसम, पर्यावरण र वातावरणमा अनुकुलनको प्रक्रिया, जीन प्युरिटी, आणुवांशिक महत्त्व, आवश्यकता, शुद्धताका पक्षमा धेरै पटक कुरा गरेको छ । उल्लेखित विषयहरूका बारेमा तयारी क्रम व्यापक चलिरहेको छ । तथापि यतिखेर यस समूहले अन्य जुझारु तामाङ युवा, सञ्चारगृह साथै संस्थाहरूसँग मिलेर कदममा रफ्तार बढाउँदैछ । यतिबेला धेरैले त बुझेर साथ दिइरहेका छन् । बुझ्न खोजिरहेका प्रशस्तै देखिएका छन् । केहीले भने नभएको आरोप लगाइरहेका छन् । केहीले भने बौद्ध धर्मको कुरा उठाएर त्यसको कुरा गर्ने एकमात्र प्राधिकारी मै मात्र हुँ भन्ने किसिमको प्रचार गरिरहेका छन् । हामीमाथि आरोपको चाङ लगाइरहेका छन् । हामीले उल्लेख गरेका बौद्धधर्म र संस्कृतिको कुरै नपढी वा पढेर पनि बङ्ग्याउँदै रुवाबासी गरिरहेका छन् । एकादुर्इ (अतिवादी)ले भने हिन्दूधर्मको विरोधी भएको भनेर छाला काढ्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपयले बुझ्न नसकेपछि प्रश्न सोधिरहेका छन् । यसै हुनाले सबैजना तामाङलाई म्हेनङ/म्हेनिङको अनि मगरसमुदायलाई डस्यक्केको, थारु समुदायलाई सखिया नाचको अनि हिन्दूलाई दशैँको उपलक्ष्यमा शुभकामनासहित लेख्दैछु ।
२. आरोप तथा प्रश्नहरू हामीमाथि लागेका आरोपहरू यस्ता छन्; जस्तै : केही पनि लेखिएको छैन । सबै पढियो, बेकारको बकबास मात्रै लेखेका रहेछन् । राजनीतिक रूपमा लेखिएका रहेछन् । चाडको कुरा रहेछन् । कहिले, कसरी, के गरेर मान्ने भन्ने रहेनछ । बोम्बोको रहेछ । लामाको कुरै छैन । बौद्धधर्मको विरुद्धमा रहेछ । हिन्दूको पैसा र विचारबाट प्रभावित र सञ्चालित हतियार रहेछन् । यिनीहरूका चेतनास्तर खत्तम छ । हिन्दू र ख्रिश्चियनका पैसाको भरमा लेखेका रहेछन् । यिनीहरूले म्हेनङको कुरा गर्दै हिन्दूको दशैँलाई तामाङ समुदायमा पुनः लाद्ने प्रयास गर्दैछन् । यिनीहरूले भोलि अर्काकी स्वास्नीलाई पनि मेरै हो भन्नेछन् । अर्काले लगिसकेकी स्वास्नी फिर्ता ल्याउन खोज्दैछन् । बाघले मारिसकेको बाख्रालाई बचाउँछु भन्दैछन् । बलिप्रथाका पक्षधर हुन् । हत्यारा हुन् । घुमाएर नाक छुने दुष्प्रयास गर्दैछन् । तामाङ समाजमाथि प्रहार गर्दै समाप्त पार्न खोज्दैछन् ।
तामाङले म्हेनङ मानेको प्रमाण के छ ? तामाङ राजाले म्हेनङ मानेको प्रमाण खै कहाँ छ ? म्हेनङ कुन क्यालेण्डर अनुसारको हो ? यसअघि कहिल्यै नसुनेको शब्द किन ल्याएको ? यो त महिनाको नाम मात्रै हो । चाड होइन । खेप्पास्हुङ गर्नु हुँदैन । खेप्पास्हुङ मात्रै हो; त्यो चाड होइन । मौसम र चाडको बीचमा कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन । दशैँ लाद्न खोजेकोले म्हेनङ हाम्रो होइन । म्हेनङ हुन त हाम्रै हो तर यो पर्व मान्दा दशैँलार्इ फाइदा पुग्छ; त्यसैले मान्नु हुँदैन । एकाथरी आरोप छ- यिनीहरू हिन्दूधर्मको विरोधी हुन् । हिन्दूधर्ममाथि प्रहार गर्नाका लागि ख्रिश्चियनले परिचालन गरेका हुन् ।
३. प्रमाण खै ?
म्हेनिङ शब्द सुनेकै छुइँन भन्नेहरूले म्हेनङ हाम्रो हुँदै होइन भन्ने तर्क गर्दैछन् । यदि तपार्इँले म्हेनिङ शब्द नै सुन्नु भएको छैन भने कसरी थाहा पाउनु भयो त, म्हेनङ तामाङको होइन भनेर ? कसरी थाहा पाउनु भयो त म्हेनङ भनेको हिन्दू दशैँलाई तामाङ भाषामा उल्था गरिएको समानअर्थी शब्द भनेर ? म्हेनङ मान्दा यो यो कारण हिन्दूको दशैँ मानेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ भनेर किन बुँदागत वा अनुच्छेदगत रूपमा लेख्न सक्नुहुन्न ? हिन्दूद्वारा परिचालित हतियार अनि हिन्दू र ख्रिश्चियनबाट पैसा खाएको भन्नेले किन कुन-कुन समयमा, कहाँ, कसबाट, कसले, कति पैसा लिएको भन्ने बारे प्रमाण पेश गर्न सक्तैनन् ?
हरेक किसिमका इतिहाससमेत पढेको असली लामा (बौद्ध) हुँ भन्नेले पनि फेसबूकमा आएर कमेण्ट गरी बसेका छन् । अझै भनौं झगडामा सामेल भएका छन् । तामाङले बौद्धको कुन सम्प्रदायलाई मानेको छ ? पञ्चमकारको कुरा कतिखेर कसरी आउँछ ? यस सम्बन्धमा तर्क गर्नुस् भन्दाखेरि त तर्कको सट्टा यस्ता भाइरसहरूलाई समयैमा समाप्त पार्नु पर्छ । नौ डाँडा कटाउनु पर्छ जस्ता शब्दको प्रयोग गरेका छन् । तिनैले कुकुर भनेको असभ्य (तुच्छ) जन्तु हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी फेसबूकवालमा कमेण्ट लेखेका छन् । के बौद्धधर्म यही हो ? प्राणी/जन्तुहरूबीचमा यसरी विभेद गरेका थिए त बुद्धले ? प्रश्नको उत्तर दिन सक्तैन र भाग्छ ।
कोही (जो आफैँ) पत्रकारहरुसँग सम्बन्धित आधिकारिक निकायको कालोसूचिमा परेका छन् । आफैँले प्रश्न गर्दै आफैँले बाबुराम भट्टरार्इ बनेर अन्तरवार्ता तयार पारेको अनि पत्रिकामा छपाएको तर बाबुराम भट्टरार्इले केही पनि गर्न नसके भन्दै फुर्इँ लगाएर सुनाउँदै हिँड्ने पनि गर्छ । ओबामाले सिधा सम्पर्क गर्छ भनेर धाक दिएका पनि छन् । तिनीहरूले म्हेनङेहरू अपराधी हुन झुड्याउनु पर्छ भनेर खोक्तै हिँडेका छन् । फोन मार्फत् थर्काउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् ।
४. स्पष्टीकरण तामाङ राष्ट्रका बारेमा अध्ययनरत छौं । मौलिक पहिचानको खोजीमा छौं । ताम्सालिङ, तामाङसालिङ, ताम्बासालिङ, तामाङ ह्युल जे भनेपनि तामाङको अधिकार सुनिश्चितताका लागि विशेषतः साहित्यमार्फत् लागिपरेका छौं । यसक्रममा हामी तामाङ विश्वदृष्टिकोणको उत्खननमा छौं । प्राप्त भएका विश्वदृष्टिकोणका आधारमा तामाङ भनेको स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर दावी गरिरहेका छौं । नागरिकताको कुरा उठाएका छौं । आवाज सानो भयो होला, तरपनि विगतमा नेपाली राज्यसत्ताले आदिवासी जनजातिमाथि गरेका घोर अमानवीय अपराधको निमित्त राज्यसत्ताले आममाफी माग्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौ । जात, जाति, समुदाय, आदिवासी र जनजातिका साथै राष्ट्र लगायतका शब्दहरू बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौं ।
धर्म के हो ? संस्कृति के हो ? देश के हो ? इतिहास के हो ? कसरी लेखिएका थिए ? अब कसरी लेख्ने ? आदिवासीको अधिकार, राज्यसत्ताको दायित्व के हो ? ताम्सालिङको आधार के ? त्यसको लागि आवश्यक तत्त्वहरूको उत्खनन्, अनुसन्धान साथै विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? हाम्रो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो ? भन्ने बारेमा बोल्दै र लेख्दै आएका छौं ।
म्हेनङ/म्हेनिङ नामक महिना र चाडबीचको सम्बन्ध बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिसकेका छौं । म्हेनङ शब्दको उत्पत्तिको कुरा लेखेको छौं । यसको महत्त्वहरू र फाइदा अनि यसले दिएको अवसरको कुरा गरेका छौं । यसमा रहेको आवश्यक पक्षको परीक्षणमा छौं । स्पष्ट परिकल्पनाका साथ अघि बढेकाले निर्णायक कुरा आउनेमा ढुक्क छौं । कुन तिथिमा कुन देवदेवी वा शक्तिको पूजा कसरी गरिन्छन् भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं । बौद्ध र बोनसँग जोडिएको म्हेनङको पक्षहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौं । त्यसैले आफैँ अस्पष्ट रहेको, बोम्बो मात्रै, लामा (बौद्ध) मात्रै, तामाङको मात्रै वा हिन्दूको मात्रै पक्षमा लागेको भन्ने आरोप निराधार रहेको दावी गर्दछौं । म्हेनङलाई हामीले तामाङको मौलिक पहिचानको मुद्दा बनाएका छौं । अन्य राष्ट्रहरू, जस्तै मगर र चौधरीहरूसँग जोडिएका पक्षहरूका बारेमा पनि उल्लेख गरेका छौं । दशैँमा दिइने सुविधा म्हेनङलाई पनि चाहियो भनेर माग गरेका छौं । यस पर्वलाई सामाजिक र सांस्कृतिक एकीकरणको अवसर हो भनेका छौं । भौगोलिक एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भन्नेमा आपत्ति जनाएका छैनौं ।
धर्ममा कस्ता प्रहार भइरहेका छन् ? प्रहार के हो ? त्यसको समाधान कसरी गर्ने ? असलीमा धार्मिक आस्था विथोल्नेहरू को हुन् ? हामी कतातिर जाँदैछौं । युवापुस्ता कतातिर दौडदैछन् ? यसले भोलि कहाँ पुर्‍याउला ? अबको बाटो के ? पर्यावरण, वातावरण र विश्वमान्यता अनि विश्वदृष्टिकोण के हो ? कसरी बन्छ ? मानवअधिकार के हो ? आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक साथै क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक विभेद, धार्मिक, राजनीतिक आस्था, सांस्कृतिक अवलम्बनको क्रममा भएका विभेद वा अपराध के हो ? त्यसको समाधान के हुन सक्छ ? मानव मात्रै नभएर सेमचेन थम्चे (हरेक प्राणी), वनस्पती, प्राकृतिक स्रोतसाधान, प्रकृतिको अधिकार, संरक्षण र सम्बर्द्धन कसरी गर्ने ? भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला, आदिवासी सञ्ज्ञान, जैविक विविधता साथै अबको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने समेतमा हामीले धेरै स्थानमा पुगेर कुरा गरेका छौं । आदिवासी खाद्य संस्कृतिको बारेमा सार्वजनिक तथा औपचारिक रूपमा लब्धप्रतिष्ठित आदिवासी जनजाति विद्वान्, विदुषीहरूलाई समावेश गरेर अन्तर्क्रिया गरेका छौं ।
महान् आदिवासी विश्वविद्यालयको लागि के कस्ता आधार छन् ? अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने क्रममा छलफल चलाइरहेका छौं । तामाङका हाल कतिपयले औंठाछापे भनिएका बोम्बो, तम्बा, लामा लगायतकासँग भएका मौलिक पहिचानका पक्षको खोजी जारी रहेको छ । ”तामाङ बुद्धिजम” भनेर शोधपत्र नै तयार पारेका छौं । तामाङ र आदिवासी ज्ञान दिवसको बारेमा चर्चा गरेका छौं । बुद्ध पूर्णिमा भनेका छौं अनि झ्यम्बेयङलाई सम्झना गर्दै कार्यक्रम गरेका छौं । धर्मको मानवशास्त्रीय उद्विकासको कुरा स्पष्ट राखेका छौं । सोइनम भनेको के हो भन्ने बारेमा स्पष्ट लेखिसकेका छौं । पत्रिका तथा फेसबूकमार्फत् प्रकाशन भैसकेको छ तर पनि कसरी किन केही छैन भनेर एकोहोरो क्रन्दन गरिहेका छन् ?
आदिवासी जनजाति साथै तामाङ राष्ट्रका अग्रज अनुसन्धाताहरूसँग छलफल गरेका छौं । उहाँहरूका प्रस्तुतिहरू सुन्दै र गुन्दै आएका छौं । यो क्रम जारी रहेको छ । धर्म र राजनीतिको बारेमा पुनःभाष्यको क्रम जारी छ । मिशन ह्रुइगी फो लको बारेमा खोज जारी रहेको छ । जीन शुद्धताको फाइदा र बेफाइदाका बारेमा बहस गरेका छौं । अन्तरजातीय विवाहदेखि परसंस्कृतिकरण के हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट छौं । नेपाली नेपालीबीचको सु-सम्बन्ध, मानवहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेको बहसमा छौं । राष्ट्र र राष्ट्रियता अनि राज्यसत्ता, देश र जनताको कुरामा धेरै कुरा गरेका छौं ।
धार्मिक सहिष्णुता, समभाव र सद्भावको बारेमा चर्चा गरेका छौं । हामी सबै सतत्, समृद्ध र सार्वभौम छौं भन्ने नारा बनाएका छौं । लोकसम्मत लोकोत्तर लोकवाद, निषेध विरुद्धको निषेधवाद, चेतनामाथि चेतनाको सिर्जनशील हस्तक्षेप, द्वन्द्व निरुपणको रचनात्मक रूपान्तरणको नियम अनि समतामुलक बहुआयामिक बहुलतावादको सिद्धान्तहरू तयार पारेका छौं । यी सिद्धान्तहरूका बारेमा व्यापक चर्चा परिचर्चा चलाइरहेका छौं ।
आसा (आदिवासी साहित्य) अभियानको कुरा गरेका छौं । यही शिलशिलामा आम, अमुक, अभिनव र आदिवासीका कुरा गरेका छौं । प्रङ्ग्यलका कुरा गरेका छौं । कोही कसैको प्रतिलिपि वा विकल्प होइन भनेका छौं । मृत्यु त देहको भनेका छौं । झ्योहोझ्योमोको कुरा गरेका छौं । कुलको कुरा गरेका छौं । कुल भनेको के हो ? यसले हाम्रो सुरक्षा कसरी गर्छ भन्ने कुरा गरेका छौं । यसलाई कसरी भेट्न सक्छौं ? यसको उपस्थिति हाम्रो शरीरमा कसरी रहेको छ भन्ने कुरा गरेका छौं । बलिप्रथाको दर्शन र त्यसका बारेमा हाम्रो आफ्नो मान्यता तयार पारेका छौं । बोन र बौद्धको संयोजनको कुरा गरेका छौं । तम्बाको कुरा उठाएका छौं । चोहो प्रणालीको बारेमा शोधपत्र तयारीको हुँदैछ ।
पुनश्चः ल्होछार सम्बन्धी विशेष लेखहरूका लागि प्रतीक्षा गर्नु होला ।
tweet १०४ वर्षे पद्मलाल तामाङको दसैं अनुभव